Wararka Maanta: Jimco, July 5 , 2013-Arday Soomaaliyeed oo ka qalin-jebisay afar jaamacadood oo dalka Shiinaha ku yaalla
Jimco, July 5, 2013(HOL)—Waxaa lagu qabtay Magaalada Wuhan ee Dalka Shiinaha xaflad ballaaran oo lagu maamusayay arday ka qalinjebisay afar Jaamacadood oo ku yaal Magaaladaas, taasoo ahayd tii ugu badneyd arday mar kaliyah ka qalin jabisay jaamacadaha waddanka Shiinaha. Ardayda qalin-jebisay ayay tiradoodu ahayd 78 arday oo kala ahaa 59 Dhakhtar, 18 Injineer iyo Arday bartay luuqadda Shiinaha.
Xafladdan oo si aad u sarreysa loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socday Safaaradda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Dalka Shiinaha Ambassador Yuusuf Xasan Ibrahim (Yuusuf Dheeg),Qunsulka(consular) Cawaale Cali Kulane iyo Wakiilka Safaraadda ee Arimaha Ganacsiga( Commercial Attaché) Saciid Jaamac Mire, Waalidiinta Ardayda iyo Ganacsato Soomaaliyeed.
Munaasabadda waxaa qudbado dhaadheer habeenkaasi ka jeediyay Safiirka Soomaalida Yuusuf Xasan (Yuusuf Dheeg) oo aad ugu mahad celiyay dhammaan ardaydii ka qalinjebisay isla markaana ugu baaqay in waddankeennu u baahanyahay aqoon yahanno faro badan khaasatan dhinacyada Caafimaadka iyo Dhismaha Qaranka. wuxuu kaaloo Safiirka uu ka hadlay Xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee ay leeyiih labada Dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha.
Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay Dhammaan Wakiillada Safaaradda,Waalidiinta iyo Ganacsatada waxay kula dardaameen Ardaydii Qalin-Jabisay in ay noqdaan kuwii Dalkooda iyo Diintooda Anfaca.
Ugu dambeyntii waxay Safaarada Soomaalida guddoonsiisay Ardaydii qalinjabisay Shahaadooyin , Xafladdaasina waxaa lagu soo gabagabeeyay heesta caanka ah ee Soomaaliyeey tooso.
Xafiiska Warqabadka HOL